အမွှာ Otter-P3D4.4 1 ရက်သတ္တပတ်အကြာ3တစ်နှစ် #1441
အဘယ်အရာကိုအကောင်းတစ်ဦးအမွှာ Otter အဆိုပါအဘို့အလာလိမ့်မယ် P3D4.4!
အောက်ပါအသုံးပြုသူ (s) ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် said: Abd
အမွှာ Otter-P3D4.4 1 တပတ်အကြာ 1 တစ်နှစ် #1457
အတွင်းနှင့်အပြင်ဘက်ပွဲ, အထူးသဖြင့်ကြည်လင်သောတူရိယာထူးချွန်ဖြစ်ကြသည်။ စာရွက်စာတမ်းများထုတ်ကုန်သုံးပြီးနှင့်လေယာဉ် simulating များအတွက်လုံလောက်သောရှင်းပြချက်သည်။ အသံလက်တွေ့ကျကျဖြစ်ကြသည်။ animations ကောင်းတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ မျက်နှာပြင်ပေါ်ထက်ဒီထုတ်ကုန်ဖို့အများကြီးပိုရှိပါတယ်။ "
ဒါ့အပြင် & Models ၏ပဒေသာ:
DHC6-100 Floater ခရီးသည်
DHC6-300 နှင်းလျှောစီး / ဘီး
DHC6-300 Tundra ဘီးကုန်တင်
DHC6-300 Tundra ဘီးခရီးသည်
DHC6-300 နျ Standard ဘီးကုန်တင် (3 ဓါးကျားကန်)
DHC6-300 နျ Standard ဘီးကုန်တင် (4 ဓါးကျားကန်)
DHC6-300 နျ Standard ဘီးခရီးသည် (3 ဓါးကျားကန်)
အမွှာ Otter-P3D4.4 1 days ago2တစ်နှစ် #1462
ကျေးဇူးပြု. အဘယ်မှာသငျသညျအဘို့ဤအမွှာ Otter ရှာတွေ့ P3Dv4?
အမွှာ Otter-P3D4.4 1 days ago2တစ်နှစ် #1463
အကြှနျုပျ၏အမွှာ Otter Carenado နှင့်၎င်း၏မဟုတ်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကနေဖြစ်ပါတယ်။
သတိထားမိသည်နှင့်အမျှ Premair သည်အခမဲ့ freeware များကိုပြုလုပ်သည် FSX နှင့် Rikoooo လည်း Premair မော်ဒယ်လုပ်ပါ။
နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်မှု - ဖြင့် James6.
အမွှာ Otter-P3D4.4 11 လအတွင်း4weeks ago #1464
ငါ Aerosoft အမွှာ Otter ကိုသုံးပါ
နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်မှု - ဖြင့် dw020352.